China ngwa nju oyi Igwe Ọdụdọ factory na-emepụta | YANJIN
Nha: 6 * 6cm
MOQ: 200pcs maka otu imewe
Etiti oge: 20-35days
Anyị nwere atụmatụ dị iche iche maka ịhọrọ gị. Anyị nwekwara ike ịcha nka gị na taịl ahụ. Na OEM ọrụ dị.
Ihe ndọta dị n'azụ ya nwere ike ịdakwasị ihe ọ bụla nwere ike ịnweta na bọọdụ magnet. Dị ka ọla kọchara ọnụ ụzọ friji, ihe mkpuchi ígwè, mkpuchi dị iche iche, oven, ụlọ ọrụ ịgba akwụkwọ, ibo ụzọ nche, bọọdụ magnetik, bọọdụ magnetik, bọọdụ eserese ụmụaka, wdg. Enwere ike iji banye foto, akwụkwọ mmado, akwụkwọ nnata, wdg.
Enweghi ike itinye aka na ọnụ ụzọ friji nwere olu, ibo ụzọ, mgbidi, iko.
Ihe seramiiki anaghị eguzogide ịda, gbaa mbọ jiri nwayọ na-edozi ya, biko egbula azụ na azụ na friji iji zere ọkọ. Isi ọrụ bụ icho mma ụlọ, ọ bụghị igwu egwu maka ụmụaka.
1. Size: 6 * 6cm
2. Efere tile + Igwe Ọdụdọ
3.Reasonable price na elu mma
4. MOQ: 200pcs maka otu imewe
5. Ebute oge: 20-35days
Anyị magnet na-aka-ese na-enwu gbaa egwurugwu agba ， Add a vibrant ikwommiri nke na agba gị ngwa nju oyi ma ọ bụ ịgba akwụkwọ cabinets na ndị a dị nnọọ iche magnet!
1. Vasatail - Tinye nbata ọmarịcha ọmarịcha igwe ọ bụla ma ọ bụ nke magnetik, dịka bọọdụ magnet, ebe obibi, maapụ, friji, igwe ntụ oyi, mkpọchi, igwe ncha, igwe magneti ihicha, faịlị ụlọ ọrụ wdg, yana kwa obere vidiyo.
2. Ihe eji achọ mma - Creativekpụrụ okike, agba agba, tinye mma na mma gị.
3. designdị dị iche nke ejiri tile mee, dị ka obodo, ndịda ọdịda anyanwụ, oge gboo, ihunanya, Victorian, Oceanic, anụmanụ, nnụnụ, okooko osisi, ahịhịa, wdg Anyị nwekwara ike ịme ma mepụta dịka ịbịaru na arịrịọ gị.
4. Aka ndi oru anyi ji aka anyi ese.
5. Ojiji: Kwadoro ọchọ mma ọ bụla nke ụdị ebe niile.
Nke gara aga: Handpainted Efere Ji achọ Art Ngidi
Osote: Okpokoro taịl nile